Samia mandray andraikitra... • AoRaha
Samia mandray andraikitra…
Miarahaba antsika mpamaky ny gazety Ao Raha. Tena mampiteny ny moana ny haratsin’ny lalana eto Iarivo. Asa na mahita azy ireny ireo tompon’andraikitra fa dia tsy misy tsy mikaikaika ny rehetra. Mifanilikilika andraikitra eo ny rehetra dia tsy fantatra intsony hoe »iza no manao inona? ».
Tsy misy faritra tsy ahitana lalana simba eto an-drenivohitra, koa tsy mahagaga noho izany raha manerana ny lalana rehetra koa ny fitohanan’ny fifamoivoizana.
Tsy maintsy miala adiny roa na telo mialoha ny ora hovonjena ny rehetra raha tiana ny ho tonga ara-potoana. Azo kajikajiana noho izany ny fatiantoka ho an’ny isam-batan’olona noho io fotoana very be loatra vokatry ny fitohanan’ny fifamoivoizana io.
Tsy maintsy mandady mantsy ny fiara vao tafidina ao anatin’ ny lavaka be tahaka ireny dobo filomanosana ireny, raha tsy hilaza afa-tsy ny etsy Ambodivona manoloana ny tobim-piantsonan’ny taksiborosy. Eny Ambohipo indray ny sisin’ny arabe vao notsindriana tara dia efa ahitana lavaka be noho ny orana ihany. Mahavariana fa asa na mba misy manam-pahefana mandalo amin’ny lalambe eto an-drenivohitra, na mitampi-maso ry zareo mandalo eo, fa dia ratsy dia ratsy tsy mendrika ny ho lalana ho an’ny renivohitr’i Madagasikara no misy.
Sao dia tsy mandoa hetra kosa anefa aloha isika valalabemandry, ka tsy misy ny vola hokirakirain’ ny Fanjakana hikojakojana ireny fotodrafitrasa ireny.
Tokony ho fitia mifamaly manko ny raharaha, fa raha tsy izany tsy hisy zava-banona. Entanina noho izany ny tsirairay mba samy handray ny andraikitra tandrify azy avy, na ny mpitondra na ny vahoaka tsy mandadiharona.
Etsy andanin’izany rehetra izany anefa dia tsy azo odian-tsy hita koa ny resaka kolikoly izay fositra manimba ny asa fampandrosoana.
Maro amin’ireo lalana nasiam-panamboarana no tsy maharitra volana vitsivitsy akory dia miverina indray amin’ny haratsiny teo aloha, na ratsiratsy kokoa noho ny teo aza. Ny anton’izany dia noho ny kiantranoantrano amin’ny tolotra omen’ireo orinasa mpanamboatra lalana, ka atao zara fa vita ilay asa, fa ny tombontsoa ifampizaràna no midangana.
Raha mbola izany no mitohy, na dia hanao lalana isan-telo volana aza isika tsy hahita lalana tsara eo. Noho izany tokony hisy fanaraha-maso hentitra sy antoka ataon’ireo mpanamboatra ny lalana fa raha tsy izany dia toy izao foana no iainantsika ary tsy hisy fampandrosoana ho vanona izany eo!
Fotodrafitrasam-pifamoivoizana :: Hasiana fanamboarana ny lalana eny Andranomahery
Lesona tsara sa valifaty politika ?